Convair 990A र FSX
प्रश्न Convair 990A र FSX
2 वर्ष4महिना पहिले #155 by FCAIR
म Convair 880 र 990 को एक धेरै ठूलो फ्यान हुँ। एक कुनै भाग्य संग धेरै महिना लागि कुलपति संग स्थापित प्राप्त गर्न प्रयास गरिएको। जो कोहीले तिनीहरूले साझेदारी गर्न इच्छुक भनेर एक कुलपति एक 880 वा 990 छैन। म HJG convairs स्थापना गर्ने प्रयास गरेका छन् तर तिनीहरू खेल देखाउनका कहिल्यै। पछि धेरै प्रयासहरू प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई मैले बल्ल बस तिनीहरूले जसरी एक कुलपति छैन देखि माथि दिइएको छ काम गर्न। म प्रारम्भिक 60 गरेको एए मा चित्रित भर्चुअल एयरलाइन साइट मा एक पाइने अन्य दिन पेंट यसलाई कुनै कुलपति छ खेल मा देखाउँछ तर। म ठूलो फाइल मान्छे अझै पनि सिक्दै छैन तर म तिनीहरूलाई विमानहरु त्यसैले म बस यहाँ कसैले यो कसरी गर्न थाह वा म यो प्रक्रिया सिक्न सक्छौं जहाँ मलाई निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ भने सोच थियो कुलपति थप्दा बारेमा पोस्ट देखेको छ। धन्यवाद अग्रिम
2 वर्ष4महिना पहिले #156 by douglasjaen
2 वर्ष4महिना पहिले #158 by Gh0stRider203
ठीक तपाईं यस सौन्दर्य जहाँ पाउनुभयो ??? म मेरो संग्रहमा उनको थप्नु पर्छ!
को कुलपति समस्या लागि जाँदा, म इमानदार मानिस थाहा छैन। म यो सीएस सी-130 वा 707 मा छ नभएसम्म कहिल्यै इमानदार को कुलपति को एक प्रशंसक भएको छु
2 वर्ष4महिना पहिले #159 by Gh0stRider203
एक प्लान समूह मा Lemme पोस्ट म छु .... शायद कसैले त्यहाँ थाहा हुनेछ!
2 वर्ष4महिना पहिले #163 by FCAIR
virtualaal.weebly.com/fleet.html म बाट डाउनलोड पायो जहाँ यो छ।
2 वर्ष4महिना पहिले #164 by Gh0stRider203
फेरि थाहा ... तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने म केही राम्रो पाइलटहरूले प्रयोग गर्न
2 वर्ष4महिना पहिले #166 by FCAIR
म राम्रो म यो बिन्दुमा राम्रो पायलट विचार छैन FSX नयाँ छु। तर म केहि गरिरहेको रुचि छु म सिम प्रगति रूपमा। र अमेरिकी मेरो पसंदीदा एयरलाइन ती प्रारम्भिक विमानहरु र रंग छ। कहिल्यै थाहा ..
2 वर्ष4महिना पहिले #167 by Gh0stRider203
रूपमा लामो तपाईं ख दर्शाउन बिन्दु एक देखि प्राप्त गर्न सक्छन् रूपमा र अवतरण मा रनवे चुम्बन गर्न सक्छन्, तपाईं राम्रो lol हुनुहुन्छ। अहिले हामी सबैभन्दा पुरानो विमान एक Boeing क्लिपर Language 314 छ दोस्रो पुरानो भएको 707 हुनेछ
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 3.491 सेकेन्ड